Dhohinsi lama magaalaa Beerut rukute – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Dhohinsi lama magaalaa Beerut rukute
Hagayya 4, 2020, kaachoon amooniyeemii naayitreetii tilmaamaan meetiriik toonii 2750 ta’u buufata doonii Beerut, Libaanos keessatti haala hin eegamneen kuufame qabsiisee dho’iinsa guddaa tartiiba olaanaa qabu kan kutaalee magaalaa durii gurguddoo barbadeesse kaase.
Dhohinsi lama, inni lammaffaan isa jalqabaa caalaa baayyee guddaa ta’e, Kibxata galgala ganama magaalaa Beerut rukutee yoo xiqqaate namoota 154 ajjeesee, 5,000 ol madeessee, miidhaa bal’aa geessiseera. Namoonni 1000 ol ta’an hospitaala kan seenan yoo ta’u, Jimaata darbe ammoo 120 ammallee haala yaaddessaa keessa akka jiran ministirri fayyaa Libaanos obbo Hamad Hassan himaniiru.
Dhohinsi inni lammaffaan buufata doonii magaalattii irraa ol ka’ee ol ka’ee, dalga rifachiisaa fi kiiloo meetira hedduudhaaf geejjibaa caccabsu uume. Hojiin sakatta’iinsaa guddaan gaggeeffamus, magaalattii magaalaa guddoo Libaanos qarqara baha Meditiraaniyaaniitti argamtu keessatti ammallee namoonni kudhanootaan lakkaa’aman achi buuteen isaanii dhabameera jedhamee amanama.
Angawoonni waan ta’e yeroo walitti qabanii ilaalan, kunoo waan beeknuu fi hin beekne ilaalla.
Dhohinsa kana maaltu fide?
Sababni sirrii ta’e ammallee hin beekamne, garuu ibiddi naannoo sa’aatii 6 p.m. Dhohinsi lama kan mudate yoo ta’u, inni xiqqaan tokko sekondii muraasa booda dhohinsi guddaan magaalattii keessaa kutaalee barbadeesseen itti aanee dhufe.
Tags: afaanakaadaamii goota kooakiraanimeapocalypsearabarabicbaha giddu galeessaabakugobakugoubeerutbeyrouthbnhaboku no hero academiaboomcalligraphycaqasootacedardekudhohinsadiimaadubaiegyptemiratesfairouzgooftaa dho'iinsa ajjeechaagootahabibihumna hundumaaibiddairaqizukujaappaanjordankacchankatsukikatsuki bakugoukonosubakuwaitlibaanosmagaalaamangameguminmhamidoriyamiidhagaamoroccomuuziqaanostalgiaqatarqoosaaretrosaudi arabiasyriatypographyuaevintage
June 13, 2022 by admin Oromo - Afaan Oromoo 0
Next د بیروت په ښار کې دوه چاودنې وشوې
Previous ବେରୁଟ ସହରକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା ​​|